Aragtida Horseed Media: Soomaaliya Waxaa U baryey Waa Cusub Doorashada Prof.Xassan Maxamuud Kadib [Editorial] - Horseed Media
Aragtida Horseed Media: Soomaaliya Waxaa U baryey Waa Cusub Doorashada Prof.Xassan Maxamuud Kadib [Editorial] September 11, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleXassan Shiikh Maxamuud: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya
Doorashadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa ahayd mid taariikhi ah, waxay ahayd mid umadda Soomaaliyeed gelisey yidiilo cusub, waxaa isaga horyimid kuwo aaminsan in kursiga Soomaaliya lacag iyo laaluush lagu gaari karo iyo kuwo aaminsan in aragti iyo barnaamij daacad ah lagu gaari karo.
Xildhibaanada Baarlamaanku waxay kala doorteen in ay u codeeyaan Xaaladda Daa’intey “States Que” iyo Isbedel “Change”, waxaa guulestey Isbedldoonka, waxaa guuleystey doonitaankii shacabka, waxaana Xildhoibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ay noqdeen kuwo u jeexa Soomaaliya waddo iyo khariidad cusub, kuwo muujiya sharafka umadda Soomaaliyeed, kuwo god dheer ku rida fadeexaddii saarnaan jirtey Baarlamaanka iyo umadda Soomaaliyeed.
Doorashadan waxaan ka baranaynaa casharo badan oo ay ka mid yihiin, In Musharixiinta Muqdisho ka soo jeeda ay ahaayeen kuwo si weyn ugu horeeyey doorashada, In magacyo badan oo qurbaha aad loo wadwado aysan wax natiijo ah keenin iyo In waxqabadkasta iyo waxaqabad la’aanba Xildhibaanadu doonayeen weji cusub iyo isbedel.
Doorashada la doortey Prof.Xassan Shiikh Maxamuud maaheyn mid dad badan saadaalinayeen, waxay noqotey lama filaan, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalmku ay si wada jir ah u soo dhaweeyeen doorashada Prof.Xassan Shiikh Maxamuud.
Waxaa xusid mudan Khudbadii taariikhiga ahayd ee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed jeediyey iyo sida uu ugu qancay natiijadii ka soo baxdey Doorashadii uu tartanka u galay.
Mudane Madaxweyne waxaa ku horyaala hawlo culus, waxaa saaka kuu bilowdey masuuliyad aad u weyn oo garbahaaga fuushey taas oo aad ilaah hortiis ugu dhaaratey in aad dalka iyo dadka daacad u noqoto, waxaana umadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo Raaskaanbooni ilamaa iyo Raas Caseyr ay sugayaan talaabooyinka aad qaado. Waxaad noqotey Madaxweyne aad u nasiib badan, waxaa lagugu doortey ciidaadi hooyo iyo hoygii aad ku dhalatey ku barbaartey, ma tihid nin wata jinsiyado dalal shisheeye, waxaad noqotey Madaxweynihii u horeeyey mudadii burburka e hoggaamiya Dawlad rasmi ah oo aan ahayn kumeelgaar, waxaa lagugu doortey doorasho xalaal iyo xor ah caalamka oo dhana laga daawanayey.
Madaxweyne kasta oo soo mara Soomaaliya mudadii burburka ahayd waxa uu xafiiska ka tagaa isaga oo la nacay, la hiifey lana habaarayo, kadib markii shacabku arkaan musuqmaasuqa, eexda, qaraabokiilka ay ku jiraan.
Maantey waxay doonayaan Umadda Soomaaliyeed Madaxweyne daacad ah, madaxweyne aan noqon mid beeleed ee noqda mid Qaran, Madaxweyne toos ula hadla shacabkiisa la socodsiiya xaaladda dalka, nin Xilqaadey eed qaade Madaxweyne haddii uu kurisga ka degayo ka dega isaga oo la jecel yahay jiilalka iyo caruurta danbena ay taariikhdiisa Iskoolda ku dhigtaan.
Mudane Madaxweyne shaqooyinka kuugu horeeya waa soo xulida Xukuumaddii aad la shaqeyn lahayd sida dastuurku qabo adiga oo lagaaga fadhiyo Wasiirka kowaad in aad soo magacawdo, waxaana Muhim ah wadada Baarlamaanku jeexay in ay noqoto Sunne ama waddo la maro, taas oo ah “Isbedel” waxaa habbooin in aad Shacabka horkeento qof u qalmi kara, karti u leh in uu hoggaamiyo xukuumad tayo leh.
Ugu danbeyntii Horseed Media waxay hanbalyo u direysaa Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Prof.Xassan Shiikh Maxamuud, sidoo kale waxaan amaan iyo maamuus mudan Xildhibaanadii u dhabar adeygey in Soomaaliya caalamka bari karto cashar cusub
Aragtida Horseed Media